by pamusoro 18-09-12
Nofuel vachabatana muna 2018 Hong Kong Autumn Electronics Fair. The zvakanaka chinhu nyanzvi uye dzakawanda Electronics zvakanaka. Kana uine kufarira zvemagetsi, kugamuchira iwe kushanyira dumba dzedu panguva yakaenzanirana uye kutaura mamwe mashoko. Zvinotevera mashoko ndiwo akanaka mashoko: Exhibition: HKTDC Hong Kon ...
Nofuel ndiye Change yedu yekare Logo iyo yakashandiswa musika 6 makore kune New Logo
Profile of IAS Sezvo basa inoratidzei pamusoro maindasitiri kushandisa michina pasi CIIF, IAS chiitiko renyika Industrial kushandisa michina Solutions, Production uye Process kushandisa michina, Electrical Systems, Industrial IT & Software uye Microsystems Technology. Kubudirira ezvidzidzo rapfuura kunovimbisa ari ...